Search results for "कर गर्नु"
घुरकि ठुम्‍मा [gʰurʌki ʈʰum‍ma] क्रि. प. अरू कसैलाई घुर्काउनु (sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)
रिङ्‌माप्‍मा [riŋ‌map‍ma] क्रि. कुरा राख्‍नु (sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)
हान्‍मा [han‍ma] क्रि. बाँड्‍नु divide, share, allot, distribute
(sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु, 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु.)
होक्‍मा [hok‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु (मिलमा, ओखलमा, ढिकीमा धान वा अन्य कुराहरू) (sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु, 5.2.1.2.2 - ओखल र ढिकीमा पिस्‍नु.) 2पानीले पर्सिनु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)